Zvakanakisa zvigadzirwa zveAmazon zviri muCanopy | IPhone nhau
Canopy: Zvakanakisa zvigadzirwa zveAmazon, zvakasarudzwa
Nhasi tsvaga zvinoshandiswa zvinowedzera kukosha Zvichienzaniswa nevamwe vevakawanda vakafanana vatinogona kuwana muApp Store, rinogona kunge rakaoma basa. Nekudaro, uye nerombo rakanaka, kuchine zvikumbiro zvinotishamisa nenzira inofadza kwazvo nekupa chimwe chinhu chakanakira zuva redu zuva nezuva.
Iyi ndiyo kesi yeCanopy, chirongwa icho zvakare chine web version (Kana yaive imwe nzira yakatenderedza?) Mukati medu tinogona tsvaga zvigadzirwa zveAmazon zvakasarudzwa nechikwata chepuratifomu. Nekuda kweizvi, isu tinokwanisa kuwana zvakanakisa zvigadzirwa zvinogona kuwanikwa mune yepasirose inodiwa online chitoro chekutenga zvemarudzi ese.
Kushanda kwayo kuri nyore kwazvo: zvichave zvakakwana kunyoresa muapp kuburikidza nhanho mbiri kuti ukwanise kuwana ese ayo mashandiro uye kutanga kunakidzwa neCanopy. Kunze kwekutsvaga akasiyana matunhu uye masaruro ekusarudza kuti tiwane zvatiri kutsvaga zviri nyore, tinogona zvakare kuwana chikamu ine yakanakisa zvigadzirwa zvigadzirwa nevashandisi. Isu saka tinowana iyo zvaunofunga yezvigadzirwa izvo zvakatosarudzwa kare. Chii chinogona kukanganisika?
Chikamu chidiki chakanakisa cheapp ichi ndechekuti parizvino ine vhezheni yeUnited States chete. Ndokunge, zvigadzirwa zvinoratidzika kwatiri zvinosarudzwa kubva muchitoro cheAmazon munzvimbo iyoyo, saka zvimwe zvezvinhu zvinoonekwa kwatiri inogona kunge isingawanikwe kutumira kunyika yedu. Kuti uzive kana zvirizvo kana kwete, zvichave zvakakwana kuwana chinongedzo chechigadzirwa chakasarudzwa uye nekushandura nzvimbo yacho kunogara nyika yedu. Chero zvazvingaitika, uye tichifunga izvi, ndeimwe yeanokumbira atinofanira kupa mukana, kunyanya kana tiri vatengi vepachikuva ichi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Canopy: Zvakanakisa zvigadzirwa zveAmazon, zvakasarudzwa
Apple inofambisa bhizinesi reTunes kubva kuLuxembourg kuenda kuIreland